AKON’NY LOZA VOAJANAHARY :: Arantin’i Rija Emadisson an-tsary ireo olona tra-boina • AoRaha
AKON’NY LOZA VOAJANAHARY Arantin’i Rija Emadisson an-tsary ireo olona tra-boina
Miverina indray ny hetsika fampirantiana sary etsy amin’ny efitrano malalaky ny Alliance Française Andavamamba. I Rija Emadisson indray no handranty ny sanganasany eny an-toerana, manomboka ny 27 aogositra ka hatramin’ny 1 septambra ho avy izao.
Mpiangaly sary , izay mifantoka kokoa amin’ ireo sary ilaina amin’ny fanadihadiana ny andavanandrom-piainana, izy. “Victimes” io indray no lohatenin’ny fampirantiana hoentina amin’ity indray mitoraka ity, izay hanehoany ny tranga mahazo ireo olona tra-boina tamin’ny fandalovan’ny rivo-doza “Chedza”, “Fundi” sy “Enawo”. Haseho ny amin’izany ny fahoriana mianjady amin’ny mponina.
Hiavaka ao anatin’io ihany koa ny fampi-sehoana ireo olona tra-boina sasany mahita tombontsoa amin’ny voina mahazo azy. Tantarainy an-tsary fa zaran’izy ireny aza misy ny loza mba tsy hisahiranany firy intsony. Rehefa amina vanim-potoana fandalovan’ny rivo-doza mantsy dia misy hatrany ny fanampiana ara-tsakafo, fitaovana sy fanafody omen’ny vondrona samihafa, ka mitaty fotsiny izany ny sasany ary mampiato vetivety ny asa fitadiavana.
Ny alatsinainy ho avy izao izany ny fotoana hamoahan’i Rija Emadisson ny sary ary maimaim-poana ny fampirantiana.
Fiaraha-miasana mpanakanto Hiara-hihira amin’i Black Nadia sy Dah’Mama i Rijade
MOZIKA MAVESATRA :: Hanolotra seho miavaka i Naday